အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိသမျှယုတ်ကစားသမားအချို့အရည်အသွေးအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားပူဇော်ဖို့လိုခငျြသောကွောငျ့ဒီဆိုဒ်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်သောအခါ၊ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမျိုးအစားအကြီးအကျယ်စာရင်းရှိသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ထိုအသင်တို့သည်ဤစုဆောင်းမှုကိုစုစည်းဖို့အသုံးပြုကြောင်းကီသော့ချက်စာလုံးများအပေါ်အခြေခံပြီးစာရင်းကိုတွေ့မြင်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်လိုအပ်အံ့သောငှါဘာမှရှိပါတယ်,ထိုသို့အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်နှင့်တကွကြွလာ. ငါတို့သည်သင်တို့ဝဘ်ပေါ်တွင်အများဆုံးလက်တွေ့ကျကျအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့သောမျိုးဆက်သစ်ကနေဂိမ်းများရှိသည်။, ဤဂိမ်းများတွင်သင်၏ကြက်တိုက်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရသောကြောင့်သင်တစ်ဦးတည်းဖြစ်သည်ဟုသင်ခံစားရလိမ့်မည်။ ဒီဆိုဒ္ရဲ႕ ဂိမ္းေတြအားလံုးဟာသင့္ကိုအရူးတစ္ေယာက္လိုျဖစ္သြားေစဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ဒါေၾကာင့္စတင္ၾကည့္႐ႈၿပီးသင့္ရဲ႕အႀကိဳက္ဆံုးကလစ္ကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂိမ်းတစ်ခုကိုသင်တွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်လုပ်ရမည့်အရာအားလုံးသည်ကစားခလုတ်ကိုထိရန်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ဘရောက်ဇာအတွက်အရာအားလုံးကစားရန်ရလိမ့်မည်နှင့်သင်အဲဒီလိုမလုပ်မီမည်သည့်ဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ရှိသည်အရာအားလုံးလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းသဟဇာတဖြစ်ပါသည်,ဒါကြောင့်သင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဂိမ်းကစားလျှင်သို့မဟုတ်သင်အိုင်ကွန်သို့မဟုတ်အန်းဒရွိုက်အပေါ်အပြေးနေတဲ့တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်သူတို့ကိုပျော်မွေ့ချင်လျှင်,သင်အွန်လိုင်းအပူဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရပါလိမ့်မယ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအားလုံးဂိမ်းအခမဲ့သင်တို့ဆီသို့လာမယ့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။, နှင့်ဤသူသည်သင်တို့ဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်မတိုင်မီသို့မဟုတ်ဘယ်မှာသင်အဆုံးမဲ့ကြော်ငြာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်သည့်အခမဲ့ဆိုက်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့အသွားအလာတွေအများကြီးရှိသည်လိမ့်မယ်ကိုသိနှင့်ကျွန်တော်အသွားအလာပြေးစေမည်မဟုတ်ကြောင်းတရားမျှတတဲ့ကြော်ငြာမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေရှာနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကျနော်တို့အခမဲ့အရာအားလုံးကိုပူဇော်ရှိရာဆိုက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အစစ်အမှန်မဟုတ်ပေမယ့်,ဤဂိမ်းဒါလက်တွေ့ကျကျထင်ရနှင့်သူငယ်အစစ်အမှန်မဟုတ်ပေမယ့်,သင်ဆဲသူတို့၏အလောင်းများနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျလိမ့်မည်နှင့်သူတို့အဆိုတော်. သင်အမှန်တကယ်သင်သည်ဤဂိမ်းများ၌တဦးတည်းဖြစ်သည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်၊အထူးသဖြင့်ဂိမ်းရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်၍လာနေသူများတွင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အကြှနျုပျတို့သညျဤဆိုဒ်ပေါ်ရှိဂိမ်းအချို့အတွက်စိတ်ကြိုက်အင်္ဂါရပ်များကိုခံစားလိမ့်မည်ဟုသေချာပါစေ။ သင်ဇာတ်ကောင်များနှင့်ပတ်သက်၍များစွာသောအရာများကိုပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည်။, သင်သည်ထိုသူတို့အကြီးမားဆုံးစွတ်ဖါးများကဲ့သို့ယူသို့မဟုတ်အချို့အထွတ်အထိပ်သတ္တဝါအားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲရရှိသူတစ်ဦးဂျပန်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦးကဲ့သို့အော်ဟစ်စေနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းအပေါငျးတို့သအမျိုးအစားများအနေဖြင့်အရေးယူရှိသည်နှင့်သင်ရိုးရှင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါ်လာမယ့်အားဖြင့်ကအားလုံးကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သင်စိတ်ကူးစေခြင်းငှါလူအပေါင်းတို့သည်ကြင်နာရှိသည်နှင့်သင်ပင်တည်ရှိမသိခဲ့ပါအချို့သောအချို့သော။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိသမျှဂိမ်းများကိုမျိုးစုံကိရိယာများပေါ်တွင်စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းသဟဇာတဖြစ်ပြီးဂိမ်းကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်ပေါ်ကဲ့သို့ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တူညီကြောင်းစစ်ဆေးချင်တယ်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာရှိသမျှသောဤဂိမ်းသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးအပေါ်အခမဲ့သင်တို့အဘို့အလာကြ၏။ ကျနော်တို့စနစ်တကျသစ်ကိုကစားသမားကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဘယ်လိုသိနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်များကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကနေပြေးစေမည်မဟုတ်ကြောင်းနည်းလမ်းများအတွက်အကြီးမားဆုံးကွန်ရက်များနှင့်အတူကြော်ငြာရန်မည်သို့သိသောကြောင့်,အခမဲ့ဂိမ်းပူဇော်ဖို့တတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။, သူတို့သည်သင်၏ဂိမ်းကစား၏လမ်း၌ရဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပလက်ဖောင်းတွင်သင်သည်အနိုင်နိုင်ကြော်ငြာတွေကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်းသင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရှုပ်ထွေး,သင်အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်သင်၏အမျိုးအကြောင်းကိုသိကြလိမ့်မည်ဟုသိလျက်ဘေးကင်းလုံခြုံခံစားရနိုင်အောင်. ဒီစုဆောင်းမှုကိုစတင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်ကအဆိုပါကမ္ဘာကြီးကိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်သောအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံများအချို့ကိုခံစားရလိမ့်မယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဂိမ်းများကိုပူဇော်သောပေါ်ပလက်ဖောင်းသင်ပြီးပြည့်စုံသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်လိုအပ်အံ့သောငှါအားလုံးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းပြွန်လမ်းညွှန်ထားတဲ့အတွက်အလားတူလမ်းအတွက်ဆိုက်ကိုလမ်းညွှန်ပါလိမ့်မယ်,ဒါပေမယ့်ခြားနားချက်အစားညစ်ညမ်းလွှင့်၏သင်ဂိမ်းရလိမ့်မယ်။ သင်ဂိမ်းကစားသည့်စာမျက်နှာသည်လိင်ပြွန်တစ်ခု၏လွှစာမျက်နှာနှင့်ဆင်တူသည်။ ဒါဟာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်ပင်သင်အကြောင်းအရာများအမျိုးမျိုးတို့ကိုပေါ်မှာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့၏လိုအပ်ချက်ကိုခံစားရသူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အပေါငျးတို့သအခြားကစားသမားကိုတွေ့လိမ့်မည်ရှိရာမှတ်ချက်အပိုင်းများနှင့်အတူကြွလာ။ အားလုံးအခမဲ့နှင့်မျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူအားလုံး!